महाधिवेशनबाट बहुमत, अल्पमत र नेतृत्वको लोकप्रियता जाँचौ : प्रधानमन्त्री ओली | Radio Nepal | रेडियो नेपाल
रेडियो नेपाल २०७७ मंसिर १७ गते १०:४४
काठमाण्डौ । नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महाधिवेशनबाट नै को बहुमत र को अल्पमतमा छ भन्ने स्पष्ट हुने भएकोले यसै वर्षको चैत्रमा महाधिवेशन गर्न जोड दिनुभएको छ ।
मंसीर १३ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘ एकता गरिरहँदा, एकताको बाटोतर्फ अघि बढिरहँदा हामीले शक्तिको हिसाब गरेनौं, सामथ्र्यको हिसाब गरेनौं । केही पनि हिसाब नगरिकन एकताको भावनाका साथ म आफैँले निर्णय गर्दा, म आफैँ अल्पमतमा पर्नेगरी मैले कमिटीहरूको निर्माण गरेको थिएँ । अल्पमतमा पर्ने नै गरी एकता गरेको थिएँ । पूर्व एमालेभित्रको स्थिति पनि हामी सबैलाई थाहा थियो र फेरि पूर्व माओवादी केन्द्रलाई दिइएको संख्यासमेत जोड्दा के हुन्छ ? त्यो पनि थाहा थियो र थाहा छ । एकतातर्फ जाँदाखेरी, एकताको भावनाका साथ जाँदाखेरी त्यस्तो संख्याले केही पनि बिगार्दैन । त्यो संख्या एकताको भावनाका साथ अगाडि बढ्नका लागि सबैमा एउटा उत्साह र समानताको भाव, सम्मानको भाव र हामी साझा कर्तव्यमा केन्द्रित भएर, साझा उद्देश्यमा केन्द्रित भएर, साझा लक्ष्य जम्मा गर्न अगाडि बढ्दै छौं भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अहिलेका कमिटीहरू मनोनयन गरिएका थिए । यी कुनै अधिवेशन, महाधिवेशन वा सम्मेलनबाट बनेका निर्वाचित कमिटीहरू होइनन् र अहिले कसैले बहुमत र अल्पमतको कुरा गर्दाखेरी कोही आफ्नो अलोकप्रियताले अल्पमतमा वा कोही लोकप्रियताले बहुमतमा गएको स्थिति पनि होइन । त्यही हो भने चैत २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गरौं भनेर हामीले भनेका छौं, गछौं भनेका छौं र महाधिवेशन गरौं । लोकप्रियता त्यहाँ प्रकट हुन्छ नि ! बहुमत को हो ? अल्पमत को हो ? त्यो गरे भइगो ।’
प्रस्तुत छ, नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले मंसीर १६ गते बसेको सचिवालय बैठकमा दिनुभएको मन्तव्यको पूर्ण पाठ :
मैले देखिराखेको छु, साथीहरू अत्यन्तै दुःखित मन लिएर दौडधुप गरिरहेका छन् । चारैतिर कुदेका छन् । पार्टी एकता गर्न सबै नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् । एकताको यो डोरी चुँडिन नपाओस्, यस्ता आरोप, यस्ता लाञ्छनाहरूका बाबजुद पनि त्यस्तो चिन्ता र एकताको प्रयास देखेर मलाई साथीहरूको माया लाग्छ । उहाँहरूको भावना देखेर, त्यो भावनाको कदर गरेर मात्रै होइन, त्यस भावनालाई मेरो अत्यन्तै सम्मान छ । तर, म एक्लैले सम्मान गरेर त हुँदैन । साथीहरू दौडिनु भएको छ, एकताका प्रयासहरू गर्नुभएको छ । तर हामी यथार्थमा यस्तो गुटबन्दीमा छौं कि एकातिर सघन वार्ता र मान्छे तान्ने प्रयास व्यापक रूपमा भइराखेका छन् । यसरी मान्छे तान्ने प्रयासले केही पनि हुनेवाला छैन । गर्न खोजेको एकता हो भने मान्छे तान्ने प्रयासले केही पनि हुँदैन । मैले पहिलेदेखि पनि भन्ने गरेको छु, एकता गर्ने हो भने मान्छे तानेर, कसैलाई अल्पमतमा पारेर, कसैलाई गलहत्याएर कसैलाई केही गर्छु भन्ने ठानिएको छ भने त्यस्तो गलत मनसाय सफल हुँदैन । होइन, हामी एकताबद्ध भएर जाने प्रयास पनि गछौं, एकताबद्ध भएरै जान्छौं भन्ने हो भने एउटा प्रक्रियाबाट जाऔं र विधिबाट जाऔं । एउटा प्रस्ताव नामको झूठको पुलिन्दा देशव्यापी वितरण गर्ने, त्यो पुलिन्दा पार्टीको नाममा छाप्ने, लोगो प्रयोग गरेर छाप्ने, केन्द्रीय कार्यालयको नाममा छाप्ने अधिकार तपाईलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ? यो व्यक्तिगत पार्टी हो ? निजी पार्टी हो यो ? अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ? कि पार्टी कब्जा भइसक्यो ? पार्टीका नामबाट र पार्टीको दस्तावेज भनेर त्यो कसरी गयो र पार्टीले प्रकाशन र प्रशारण गर्ने निर्णय कहिले ग¥यो ? वितरण गर्ने निर्णय कहिले ग¥यो ? पार्टीको लोगो प्रयोग गरेर कार्यालयबाट प्रकाशन गर्ने निणर्य कहिले ग¥यो ? इजाजत कहिले दियो पार्टीले ? यति हदसम्मको बेथिति गर्ने ? गुटबन्दी त थियो थियो, अब त गुटबन्दीभन्दा बढी बेथिति र मानिलिऔं यो पार्टी कब्जा नै भइसक्यो ? साथीहरूले पद्धति, प्रक्रिया र विधि निकै सिकाउनु हुन्छ । भन्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, प्रचार गर्नुहुन्छ तर व्यवहार …?
हाम्रा विषय त कसरी मान्छे जम्मा गर्न सकिन्छ ? कसरी झूठफरेव फिजाउन सकिन्छ ? कसरी भ्रममा पार्न सकिन्छ र मान्छेहरूलाई कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ र तथाकथित बहुमत कसरी पु¥याउन सकिन्छ ? त्यसमा केन्द्रित छ । अहिले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले यसढंगको पार्टी एकता भन्छ ? लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको अभावमा हाम्रो पार्टी विगतमा एकताबद्ध नभएको थियो ? पार्टी एकता÷एकीकरण लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त, बहुमत र अल्पमत, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधिनस्थ, व्यक्ति कमिटीको अधिनस्थ र अल्पमत, बहुमतको अधिनस्थ हुन्छ भन्ने कुरा नसुनेर÷नबुझेर एकता नभएको थियो र ? त्यो कुरा हामीले महसुस गरेर बहुमत र अल्पमतका आधारमा वा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर यो एकता÷एकीकरण गरेका हौं र ? कि त्यसभन्दा बृहत आन्दोलनको उद्देश्य, राष्ट्रिय उद्देश्य र जनताका हितहरूमा केन्द्रित भई पार्टी एकता र एकीकरणतिरको उद्देश्यका लागि यसको महत्वलाई आत्मसात् गरेका हौं ? यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हाम्रा महान उद्देश्यहरू र ती उद्देश्यहरूप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताबाहेक कुनचाहिँ संगठनात्मक सिद्धान्तले एकता गरायो ? अब अहिले आएर लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त ! कतिबेला संगठनात्मक सिद्धान्त कुन रूपमा लागु हुन्छ ? एकता÷एकीकरणको बाटो छाडेर भ्रमपूर्ण ढंगले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तका कुरा गरेर ? त्यसो हो भने ठीक छ । प्रचण्डजीले भन्नुभएको म सम्झन्छु, “बाटो बिराइएको छ भने पुरानै ठाउँमा फर्किनुपर्छ र त्यसलाई त्यहीँबाट सच्याइनु पर्छ ।” ल, ठीक छ, त्यसै गरौँ । फेरि फर्किएर त्यहीँ जाऔं, २०७५ साल जेठ २ गते नै फर्किऔं । र, त्यहीँबाट फेरि सुरु गरौं । हाम्रा उद्देश्यहरू यथावत् नै छन् भने हाम्रो एकताको आवश्यकताको बोध यथावत छ भने, अहिले पनि हामीले त्यसलाई सान्दर्भिक देख्छौं भने जेठ २ गते नै फर्केर जाऔं ।